Xildhibaan Faarax oo sheegay in aan jirin cid gobol joogta oo Kenya kaalmo ka siin karta Dacwada Badda – Kalfadhi
September 4, 2019 September 4, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir, oo kamid ah mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, oo ka hadlayay dacwada Badda ee u dhaxeeysa dowladdaha Soomaaliya iyo Kenya, ayaa sheegay in khilaafka noocaasi ah madasha uu leeyahay keliya ay tahay Maxkamadda Caalamiga.
“Mudo hadda laga joogo shan sanno ka hor, ayaa madashaasi la geeyay, waxaana dowladda Soomaaliyeed ay ku mahadsantahay in kiiskeenna loo sameeyay, wax-walbo oo sharci ah oo Adduunyada ay waafaqsantahay”.
Dhinaca kale waxaa uu sheegay hadalada kasoo yeeraya siyaasiyiinta iyo xildhibaanada Kenya in ay yihiin wax si aad ah uga gaaban luuqada xadaariga ah ee Adduunyada ay iskula dhaqanto. Waxaa uu hadalkiisa uu raaciyay in Maxkamadda Cadaalada aysan saameyn karin hadallo aan loo meel-dayin oo kasoo yeera dad.
“Waxaa jira dad badan oo u maleeya maamulka Jubaland iyo arrinta badda in ay xiriir leeyihiin, arrinta badda waa arrin dowladda Federaalka, Kenya iyo maxkamadda Caalamiga ah u dhaxeeysa, cid Gobol joogta oo dowladda Kenya kaalmo ka siin karta arrinta badda ma jirto”, ayuu sii raaciyay.
Soomaaliya waxay dooneysaa in cabbirka xadka badda si toos ah loola dhiririyo xadka dhulka, halka Kenya ay dooneyso in la weeciyo. Baaxadda uu ku fadhiyo badda lagu muransan yahay waxa uu gaarayaa ilaa 100,000km oo isku wareeg ah.